Wararka Maanta: Talaado, Jun 11, 2013-Madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo ku baaqay in shacabku ay qayb ka qaataan Ciribtirka Cudurka Dabeysha (SAWIRRO)
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, guddoomiyaha baarlamaanka, Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari) iyo ra’iisul wasaare, Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday inay ka faa’iideystaan fursadda tallaalka dabeysha, iyagoo goobta isaga tallaabay cudurka.
Munaasabadda ayaa ahayd mid lagu xoojinayay muhiimadda uu tallaalka dabeyshu u leeyahay bulshada, iyadoo sheegay in Soomaaliya ay ka mid noqotay afar dal oo keliya oo dib looga helay cudurkan dunida oo dhan.
Wasiiradda arrimaha bulshada, Marwo Maryam Qaasim oo munaasabadda ka hadashay ayaa sheegtay in sannadkii 2007 laga cirib-tiray Somalia cudurkan dilgaaga ah, balse uu dib loogu arkay dad Soomaaliyeed oo uu cudurkan ku dhacay.
“Cudurkan waa mid dawo lahayn, balse wuxuu leeyahay ka hortag waana in la iska tallaalo,” ayay tiri wasiiradda oo sheegay in cudurkan uu dadka naafo ka dhigo, iyagoo intaas intaas ku dartay in cudurkan laga helay wiil 13-jir ah taasina ay keentay in xitaa dadka waaweyn laga tallaalo cudurkan halista ah.
Wasiiradd oo sii hadlaysa ayaa tiri: “Waxaa cudurkan laga tallaabay tan iyo bishii May ee sannadkan 600,000 oo qof oo, haddana ay rajeynayaan in lixda casho ee soo socota laga tallaalo in ka badan afar milyan oo qof oo Soomaali ah.”
Madaxdii ka hadashay goobta ayaa waxaa ka mid ahaa mas’uul ka socday Qaramada Midoobey, ra’iisul wasaaraha, guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha oo dhammaantood ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay fursadan ka faa’iideystaan. Madaxweynaha ayaa yiri: “Aniga ayaa billaabaya tallaalka si aan shacabka u tusno in tallaalku uu faa’iido u yahay dhibaatana uusan u keenayn, waana mid badbaadinaya in cudurka halista ah uu qofka ku dhaco. Cudurkan ka hortag buu leeyahay oo ma laha daawo, tallaalkii aan uga hortagi lahayna waa naloo keenay ee aan u midowno inaan iska wad tallaalno, ugana mahadcelino beesha caalamka iyo Qaramada Midoobay oo noo keenay tallaalkii ka hortagga cudurka dabeysha.”